Tartan iyo Tacliin: Shaafici Boosaso oo u gudbay tartanka kama dambaysta iyo Al-Nur oo haray – Radio Daljir
Agoosto 4, 2013 4:35 b 0
Boosaaso, Aug? 4, 2013 – Wareega Afar dhamaadka ?barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Daljir ayaa socda, iyadoo haatan loo gudbay tartanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare, kaasi oo oo ay xalayto iska xaadiriyeen dugsiga shaafici Secondary magaalada Bosaso.
Tartanka ayaa xalayto u dhexeeyey Al-nur Badhan iyo shaafici Bosaso, Tartanka ayaa ahaa mid dugsigii badiya uu u soo baxayo finalka kama dambaysta ah, waxaana guushu ay raacday iskuulka Shaafici ee magaalada Bosaso.
? Al-nur Badhan sanadkii hore iyaga ayaa koobka qaaday, haddana waxay rabeen in ay ku ceshtaan balse waxaa ay heleen 8 derejo, halka Shaafici Bosaso uu helay 12 Derejo, sidaas ayaa guushu ugu raacday? ayuu yiri ustaad Yuusuf Suudi Cabdi oo natiijada ku dhawaaqay.
Caawa ayaa tartanka waxaa sidoo kale fooda is dari doona iskuulada Cumar Samatar Galkacayo iyo dugsiga sare ee Dangoronyo Secondary ee gobolka Nugaal ka tirsan, waxaana midkood laga filayaa in uu caawa u soo boxo tartanka ugu dambeeya oo uu la yeelan doono Shaafici Bosaso.